Maitiro ekudzivirira mavhidhiyo kubva otamba otomatiki muSafari | Ndinobva mac
Kutamba mavhidhiyo otomatiki pane mamwe mapeji ewebhu ndechimwe chezvinhu zvakaipisisa zvakagadzirwa, asi zvinowanzoitika kuwana mapeji ewebhu nerudzi urwu mavhidhiyo ane ruzha, izvo zvese zvavanoita zvinoshatirisa uye zvinoshungurudza mushandisi. Iwe une chokwadi chekuva neni pane izvi. Neraki, mamiriro akavanzika muSafari anotibvumidza kudzima otomatiki kutamba kwemavhidhiyo, saka Kana iwe uchiguta nerudzi urwu rwezvinhu zvemultimedia zvine otomatiki kutamba, Tevere isu tiri kuzokuratidza maitiro ekuwana iyo yakavanzwa menyu uye kukwanisa kudzima otomatiki kutamba kwemavhidhiyo.
Dzima Autoplay yemavhidhiyo muSafari
Iyi sarudzo inodzivisa otomatiki kuburitsa mavhidhiyo muSafari, saka kana tichida kuburitsa chero vhidhiyo inoratidzwa pawebhu peji ratiri kushanyira isu tichafanirwa kudyidzana nazvo nekumisikidza kutamba, pane izvi isu tinongofanirwa kubaya pane bhatani rekutamba. Zvinogona kunge zvisingaenderane nezvido zvako, saka unogona kudzima uye kubvisa iyi sarudzo kuti uone kana ichinyatso kukosha kana kwete.
Kutanga, isu tinofanirwa kumisikidza iyo yakavanzwa menyu nekuwana iyo Terminal uye nekunyora inotevera script:
Iye zvino tinotangazve iyo Safari browser, dai taivhura. Tevere tinoenda kuDebug menyu, iri panoperera sarudzo dzeSafari.
Mukati meDebug menyu, tinoenda kuMedia Mireza uye sarudza Disable Inline Vhidhiyo.
Izvo hazvidikanwe kutangazve browser kuti uone kuti inoshanda. Kana iwe uchigara uchishanyira peji rewebhu rinotamba mavhidhiyo otomatiki, shanyira iro uye iwe uchaona kuti vhidhiyo yacho ichave yakamira zvakadii uye haizotambe kusvikira iwe wabaya vhidhiyo iri mubvunzo. Zvese YouTube neVimeo zvinokanganiswa neichi chidiki chehunyengeri, saka vamwe vanhu vanogona kunge vasingavhiringidzike nekushandisa kwazvinopa, asi chokwadika haugone kuwana zvese muhupenyu huno uye nekufarirwa nemunhu wese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekudzivirira mavhidhiyo kubva otamba otomatiki muSafari